2014-12-28 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ဝင်း​ဒိုး7Ultimate x ၆၄ (​ဒီ​ဇင်​ဘာ 2013 ​တုန်း)
​ဒါ​က​တော့ Window7ultimate ​အ​တွက် 32bit ​ကော 64 bit ​ကော ​ပါ​တဲ့ iso ​ဖိုင်​ပါ။. ​လို​ချင်​တဲ့​သူ​များ Download ​လုပ်​ယူ​နိုင်​ပါ​တယ်။ 200MB ​စီ ​ခွဲ​ပြီး ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။ ​အား​လုံး​အ​ဆင်​ပြေ ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့် ​ပါ​တယ်။ ​ဒီ​ဖိုင်​တွေ​ကို Hj split ​နဲ့ ​ဖိုင်​ပြန်​ဖြေ​ရ​မှာ​ပါ။ ​လုပ်​တတ်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။ ​ဖိုင်​ဖြေ​နည်း​ကို ​ရေး​ပေး​ထား ​ပါ​တယ်။ ​ထပ်​ပြီး​တော့​လည်း ​ရေး​ပေး​ပါ​ဦး​မယ်။ ​အ​ခု​တော့ ​လို​ချင်​တဲ့​သူ​များ Download ​လုပ်​လိုက်​ကြ​ပါ​ဦး။ Loader ​ကို​လည်း ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်။
​ဇန်​န​ဝါ​ရီ (၁) ​ရက်​နေ့​က​စ​ပြီး ​နည်း​ပ​ညာ​များ​ပြန်​လည် ​ရေး​သား​နေ​ပါ​ပြီ ..
​ယ​ခု​ဆိုက်​မှာ ​ကျ​နော့်​အ​နေ​ဖြင့် ​နည်း​ပ​ညာ​များ ​ပြန်​လည်​ရေး​သား​နေ​ပါ​ပြီ .. ​လတ်​တ​လော ​ယူ​နီ​ကုတ်​နဲ့ ​သက်​ဆိုင်​တဲ့ ​ပို့စ်​တွေ​ကို ​ဦး​စား​ပေး ​တင်​ပေး​သွား​မှာ​ဖြစ်​သ​လို. ​လက်​လှမ်း​မီ​သ​လောက် Software ​များ​ကို​လည်း ​မည်​သည့် adf.ly ​မှ ​မ​ခံ​ပဲ Google Drive ​က​နေ Direct link ​ဖြင့် ​ချ​ပေး​ထား​မည်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​တင်​ပြီး​သား ​ပို့စ်​များ​ထဲ​မှ adfly ​ကြော်​ငြာ​များ​နေ​ရာ​တွင်​လည်း ​ပြန်​ပြီး link ​များ ​အ​စား​ထိုး​ပေး​သွား​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​ဘယ်​လောက်​ကြီး​တဲ့​ဖိုင်​ဖြစ်​ဖြစ် ​တစ်​ဖိုင်​တည်း​ဖြင့် ​တင်​ပေး​ထား​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​အ​ပိုင်း​ပိုင်း​နှင့် Download ​လုပ်​ရ​တာ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​မှု့​များ​ရှိ​မည် ​စိုး​သော​ကြောင့် ​တစ်​ဖိုင်​တည်း​ဖြင့် ​တင်​ပေး​တာ​ပါ။ ​အ​ဓိ​က​က​တော့ ​ဆိုက်​မှာ ​နည်း​ပ​ညာ​ကို ​အ​သား​ပေး​ရေး​သွား​မှာ​ဖြစ်​သ​လို။ ​လို​အပ်​သည့် Software ​များ​ရှိ​ပါ​က ​ဆိုက်​မှာ ​အ​မြဲ​မ​ပြတ်​လာ​ရောက် ​ရှာ​ဖွေ​နိုင်​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​မိတ်​ဆွေ​တို့​ကို​လည်း ​ယူ​နီ​ကုတ်​ကို ​အ​သုံး​ပြု​ကြ​ဖို့ ​တိုက်​တွန်း​လို​ပါ​တယ်။ ​ဒီ​နေ့​တော့ ​ဆိုက်​ပြန်​ပြင်​တာ​နဲ့.. ​တစ်​ခြား​မိတ်​ဆွေ​ဆိုက်​တွေ​ကို ​လိုက်​ပြန်​ပြင်​ပေး​နေ​တာ​ရော​ကြောင့်​မို့ ​တင်​တာ ​နည်း​နည်း​နောက်​ကျ​သွား​ပါ​တယ်။ ​အား​လုံး​ပဲ ​နှစ်​သစ်​မှာ ​ရွှင်​လန်း​ချမ်း​မြေ့​ကြ​ပါ​စေ​လို့ ​ဆု​တောင်း​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်။
​မြန်​မာ​ပြည်​နည်း​ပ​ညာ​လော​က ​တိုး​တက်​ဖို့ ​သင်​ကူ​ညီ​နိုင်​ပြီ​ဆို​ရင် ​သင်​ကူ​ညီ​နိုင်​မ​လား ???
​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​သား​မှန်​ရင် ​အောက်​က ​မေး​ခွန်း​လေး​ကို ​ဖတ်​ပေး​ပါ။
​သင့်​နိုင်​ငံ​ရဲ့ ​မိ​ခင်​ဘာ​သာ ​စ​ကား​ကို ​လေး​စား ​တန်​ဖိုး​ထား​ပါ​သ​လား။
​နိုင်​ငံ​တ​ကာ​မှ ​ထုတ်​လုပ်​ထား​သော Digital Device ​များ​တွင် ​မြန်​မာ​ဘာ​သာ ​ပါ​ဝင်​လို​ပါ​သ​လား။
​အင်​တာ​နက်​တွင် ​တိ​ကျ​သည့် ​ရှာ​ဖွေ​ပေး​မှု့​များ ​ရ​ယူ​လို​ပါ​သ​လား။
​အင်​တာ​နက်​ရှိ ​မည်​သည့်​ဘာ​သာ​ဖြင့် ​ရေး​သား​ထား​သည့် ​မည်​သည့် webpage ​မ​ဆို ​မြန်​မာ​ဘာ​သာ​ဖြင့် Auto translate ​လုပ်​ပြီး ​အ​သုံး​ပြု​လို​ပါ​သ​လား။
​နိုင်​ငံ​တ​ကာ​နှင့် ​ရင်​ဘောင်​တန်း​နိုင်​ပြီး ​သ​တင်း၊ ​အ​ချက်​အ​လက်​များ​ကို ​လျှင်​မြန်​လွယ်​ကူ​စွာ ​ဖ​လှယ်​လို​ပါ​သ​လား။
​နိုင်​ငံ​ခြား​သား Programmer ​များ​မှ ​ရေး​သား​ထား​သော Software ​များ​တွင် ​မြန်​မာ​ဘာ​သာ ​ပါ​ဝင်​လို​ပါ​သ​လား။
​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​ရှိ ​က​ချင်၊ ​က​ယား၊ ​က​ရင်၊ ​ချင်း၊ ​မွန်၊ ​ရ​ခိုင်၊ ​ရှမ်း၊ ​ပ​အို့ ​စ​သည့် ​တိုင်း​ရင်း​သား​များ​ရဲ့ ​မိ​ခင်​ဘာ​သာ​တွေ​ကို ​သင်​လေး​စား​တန်​ဖိုး​ထား​သ​လား။ ​ဒီ​တိုင်း​ရင်း​သား​များ​၏ ​ဘာ​သာ​ကို ​မြန်​မာ​စာ​နှင့် ​ရင်​ဘောင်​တန်း​စေ​ဖို့​ရော ​ဆ​န္ဒ​ရှိ​သ​လား။
​လား ..... ​လား ..... ​လား ........ ​လား .......... ​အ​ပေါ်​က ​အ​နည်း​ငယ်​မျှေ​သာ ​မေး​ခွန်း​လေး​တွေ​ကို ​သင်​ခေါင်း​ညိတ် ​လက်​ခံ​ခဲ့​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​ယ​နေ့​က​စ​ပြီး ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​ရဲ့ ​နည်း​ပ​ညာ​လော​က​ကြီး ​တိုး​တက်​သွား​စေ​ဖို့ ​ဆို​ရင် ​ကျ​နော်​တို့ ​တစ်​ပွဲ​ထိုး ​လက်​ပူ​တိုက် ​သေး​နေ​ရ​သော Zawgyi ​ကို ​စ​တင်​စွန့်​လွှတ်​ပြီး Unicode ​စစ်​အ​မှန်​ကို ​ပြောင်း​လဲ(​အ​စား​ထိုး) ​အ​သုံး​ပြု​ကြ​ဖို့ ​အ​ချိန်​တန်​ပြီ​ဆို​တာ ​သ​တိ​ပေး​လိုက်​ပါ​ရ​စေ .... ​သင် unicode ​ကို ​ပြောင်း​သုံး​ယုံ​မျှ​ဖြင့် ​အဲ့​ထက် ​ပို​သော ​အ​ခွင့်​အ​ရေး​ပေါင်း​များ​စွာ​ကို ​ရ​ယူ​ပိုင်​ဆိုင်​ဖို့ ​ကူ​ညီ​ပြီး​သား ​ဖြစ်​သွား​တယ်​ဆို​တာ​ကို ​လက်​ခံ​တယ် ​ဆို​ရင်​တော့ ​ဒီ​နေ့​က​စ​ပြီး Unicode ​ကို ​အ​သုံး​ပြု​ကြ​ပါ​စို့ ..........
​မွ​နျ​မာ​နို​ငျ​ငံ​သား​မှ​နျ​ရ​ငျ ​အော​ကျ​က ​မေး​ခှ​နျး​လေး​ကို ​ဖ​တျ​ပေး​ပါ။
​သ​ငျ့​နို​ငျ​ငံ​ရဲ့ ​မိ​ခ​ငျ​ဘာ​သာ ​စ​ကား​ကို ​လေး​စား ​တ​နျ​ဖိုး​ထား​ပါ​သ​လား။
​နို​ငျ​ငံ​တ​ကာ​မှ ​ထု​တျ​လု​ပျ​ထား​သော Digital Device ​မြား​တှ​ငျ ​မွ​နျ​မာ​ဘာ​သာ ​ပါ​ဝ​ငျ​လို​ပါ​သ​လား။
​အ​ငျ​တာ​န​ကျ​တှ​ငျ ​တိ​က​ဩ​ညျ့ ​ရှာ​ဖှေ​ပေး​မှု့​မြား ​ရ​ယူ​လို​ပါ​သ​လား။
​အ​ငျ​တာ​န​ကျ​ရှိ ​မ​ညျ​သ​ညျ့​ဘာ​သာ​ဖွ​ငျ့ ​ရေး​သား​ထား​သ​ညျ့ ​မ​ညျ​သ​ညျ့ webpage ​မ​ဆို ​မွ​နျ​မာ​ဘာ​သာ​ဖွ​ငျ့ Auto translate ​လု​ပျ​ပွီး ​အ​သုံး​ပွု​လို​ပါ​သ​လား။
​နို​ငျ​ငံ​တ​ကာ​နှ​ငျ့ ​ရ​ငျ​ဘော​ငျ​တ​နျး​နို​ငျ​ပွီး ​သ​တ​ငျး၊ ​အ​ခ​ကျြ​အ​လ​ကျ​မြား​ကို ​လြှ​ငျ​မွ​နျ​လှ​ယျ​ကူ​စှာ ​ဖ​လှ​ယျ​လို​ပါ​သ​လား။
​နို​ငျ​ငံ​ခွား​သား Programmer ​မြား​မှ ​ရေး​သား​ထား​သော Software ​မြား​တှ​ငျ ​မွ​နျ​မာ​ဘာ​သာ ​ပါ​ဝ​ငျ​လို​ပါ​သ​လား။
​မွ​နျ​မာ​နို​ငျ​ငံ​ရှိ ​က​ခ​ငျြ၊ ​က​ယား၊ ​က​ရ​ငျ၊ ​ခ​ငျြး၊ ​မှ​နျ၊ ​ရ​ခို​ငျ၊ ​ရှ​မျး၊ ​ပ​အို့ ​စ​သ​ညျ့ ​တို​ငျး​ရ​ငျး​သား​မြား​ရဲ့ ​မိ​ခ​ငျ​ဘာ​သာ​တှေ​ကို ​သ​ငျ​လေး​စား​တ​နျ​ဖိုး​ထား​သ​လား။ ​ဒီ​တို​ငျး​ရ​ငျး​သား​မြား​၏ ​ဘာ​သာ​ကို ​မွ​နျ​မာ​စာ​နှ​ငျ့ ​ရ​ငျ​ဘော​ငျ​တ​နျး​စ​ဖေို့​ရော ​ဆန်​ဒ​ရှိ​သ​လား။
​လား ..... ​လား ..... ​လား ........ ​လား ..........
​အ​ပျေါ​က ​အ​န​ညျး​င​ယျ​မြှေ​သာ ​မေး​ခှ​နျး​လေး​တှေ​ကို ​သ​ငျ​ခေါ​ငျး​ညိ​တျ ​လ​ကျ​ခံ​ခဲ့​မ​ယျ​ဆို​ရ​ငျ​တော့ ​ယ​နေ့​က​စ​ပွီး ​မွ​နျ​မာ​နို​ငျ​ငံ​ရဲ့ ​န​ညျး​ပ​ညာ​လော​က​ကွီး ​တိုး​တ​ကျ​သှား​စ​ဖေို့ ​ဆို​ရ​ငျ ​က​နြျော​တို့ ​တ​ဈ​ပှဲ​ထိုး ​လ​ကျ​ပူ​တို​ကျ ​သေး​န​ရေ​သော Zawgyi ​ကို ​စ​တ​ငျ​စှ​နျ့​လှ​တျ​ပွီး Unicode ​စ​ဈ​အ​မှ​နျ​ကို ​ပွော​ငျး​လဲ(​အ​စား​ထိုး) ​အ​သုံး​ပွု​ကွ​ဖို့ ​အ​ခြိ​နျ​တ​နျ​ပွီ​ဆို​တာ ​သ​တိ​ပေး​လို​ကျ​ပါ​ရ​စေ .... ​သ​ငျ unicode ​ကို ​ပွော​ငျး​သုံး​ယုံ​မြှ​ဖွ​ငျ့ ​အဲ့​ထ​ကျ ​ပို​သော ​အ​ခှ​ငျ့​အ​ရေး​ပေါ​ငျး​မြား​စှာ​ကို ​ရ​ယူ​ပို​ငျ​ဆို​ငျ​ဖို့ ​ကူ​ညီ​ပွီး​သား ​ဖွ​ဈ​သှား​တ​ယျ​ဆို​တာ​ကို ​လ​ကျ​ခံ​တ​ယျ​ဆို​ရ​ငျ​တော့ ​ဒီ​နေ့​က​စ​ပွီး Unicode ​ကို ​အ​သုံး​ပွု​ကွ​ပါ​စို့ ..........
​ဝင်း​ဒိုး7Ultimate x ၆၄ (​ဒီ​ဇင်​ဘာ 2013 ​တုန်း...
​ဇန်​န​ဝါ​ရီ (၁) ​ရက်​နေ့​က​စ​ပြီး ​နည်း​ပ​ညာ​များ...
​မြန်​မာ​ပြည်​နည်း​ပ​ညာ​လော​က ​တိုး​တက်​ဖို့ ​သင်​...